I-Sao Tome kunye neVisa yePrincipe ekufikeni | natvisa.com
ISao Tome kunye nePrincipe Visa kwi-Intanethi yesicelo
I-Sao Tome kunye nePrincipe bazise inkqubo elula kakhulu kwaye elula yokufumana i-visa kolu hlanga lwesiqithi. Inkqubo ye-visa ye-elektroniki ivumela abemi bamazwe ahlukeneyo ukuba bafake izicelo ze-visa kwi-intanethi, ngaphandle kokundwendwela ilizwe. Le nkqubo intsha isandula ukufumana impendulo engathethekiyo kubantu kwihlabathi liphela, njengoko oku kuye kwenza yonke inkqubo yokufumana i-visa eguqukayo kwaye ifikeleleke kuye wonke umntu onqwenela ukutyelela eli lizwe. Abafakizicelo bangaqala ngokuzalisa ifom yesicelo, ngokuthumela uxwebhu kunye nokwenza intlawulo. Njengoko ifom yesicelo icwangciswa ngempumelelo abafaki-zicelo baya kufumana ileta yokuvunywa kwe-visa. Oku kufuneka kuziwe namagosa okungenelela xa efika ukuze afumane i-eVisa.
Fika eSao Tome nasePrincipe
Inkqubo yesicelo se-eVisa ekwi-Intanethi ifuna ukuba abafaki-zicelo babonelele ngamaxwebhu athile. La maxwebhu ayikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zakhe zepaspoti yomenzi-sicelo.
Ukuba ne-id esebenzayo ye-imeyile kubaluleke kakhulu ekugqibeni inkqubo yesicelo se-eVisa. I-imeyile ye-id kufuneka ifikeleleke kumenzi-sicelo njengoko ulwazi malunga nobume be-eVisa kunye neVisa yokuVunywa kweVisa iya kuthunyelwa kule id ye-imeyile.
Ukuba nepasipoti esebenzayo kubalulekile ukufaka isicelo se-eVisa eSao Tome nasePrincipe. Ipaspoti kufuneka okungenani ibe neentsuku ezingama-360 okanye ngaphezulu kokusebenza. Ipasipoti enobunyani beentsuku ezingaphantsi kwe-360 ayizukuvunywa.
Uhambo lweNdawo yokuhlala no Indawo yokuhlala
Abafakizicelo kufuneka babelane ngohambo lwabo kunye nedilesi yendawo abakhethe ukuhlala kuyo xa befaka isicelo se-eVisa eSao Tome nasePrincipe. Idilesi ingaba yehotele okanye ihotele. Kwimeko apho umntu ukhetha ukuhlala nomhlobo okanye isihlobo, kuya kufuneka kwabelwane ngolwazi kunye nedilesi yaloo mntu.
Ileta yokuvunywa kweVisa
Abafaki zicelo kufuneka baphathe ileta yabo yokuvunywa kunye nokuyithumela kumagosa okufudukela kwilizwe laseSao Tome nasePrincipe.
Bhatala isitampu seVisa
Abafaki-sicelo kufuneka bazalise ifom yokungena kunye nokuphuma kwaye bahlawule isitampu se-visa kumagosa okufudukela e-Sao Tome nasePrincipe.
Itikiti lohambo olujikelezayo
Abahambi mababonise amatikiti abo eenqwelo moya aqinisekisiweyo abonisa ukufika nokuhamba kwabo eSao Tome nasePrincipe.
Abahambi kufuneka babe nayo incwadana yokundwendwela xa befika eSao Tome nasePrincipe. Ipaspoti kufuneka okungenani ibeneenyanga ezili-12 zomthetho.
Iinkcukacha zeVisa zaseSao Tome kunye nePrincipe
Yintoni iSao Tome kunye nePrincipe eVisa ekufikeni?
Ukuba amahlathi ashinyeneyo, amasimi amadala, iilwandle ezintle kunye nobuhle beetropiki yinto okhangele phambili ukuyonwabela kuhambo lwakho olulandelayo, iSao Tome nePrincipe yindawo yakho. Nangona kunjalo ukungena kwesi siqithi sihle, umntu kufuneka abe namaxwebhu afunekayo kwaye enye yezona zibaluleke kakhulu kuyo yi-eVisa eSao Tome nasePrincipe. Olu luxwebhu lokuhamba oluvumela abemi bamazwe angaphandle ukuba bangene kweli lizwe ngokusemthethweni kwaye bahambe kwimihlaba yalo.
I-eVisa eya eSao Tome nasePrincipe inokufumaneka xa ufika kwisikhululo seenqwelomoya iSao Tome kunye nePrincipe. Ukufumana i-eVisa, abahambi kufuneka baqale bafumane iileta zokuvunywa kwe-visa kwi-intanethi. Inkqubo yesicelo se-elektroniki yaziswa ngo-2012, evumela abemi bamazwe ahlukeneyo ukuba benze isicelo soxwebhu lokuhamba nakweyiphi na indawo.
Ungasifaka njani isicelo seSosa Tome kunye nePrincipe visa kwi-Intanethi (iVisa yokuVunywa kweVisa)?
Njengoko sele kukhankanyiwe, uRhulumente waseSao Tome kunye nePrincipe unika i-visa kubakhenkethi bayo kuphela xa befika. Ke ngoko, iindwendwe kufuneka kuqala zifumane ileta yokuvunywa kwe-visa kwi-intanethi. Inkqubo inokugqitywa ngamanyathelo ama-3 alula.
Gcwalisa ifomu lesicelo: Inkqubo yokufumana ileta yokuvunywa kwe-visa kunye ne-eVisa iqala ngokuzalisa ifom yesicelo. Le fomu inokufunyanwa kwiwebhusayithi karhulumente evumela abafaki zicelo ukuba beme emgceni. Le fom kufuneka ikhutshelwe kuqala, emva koko izaliswe ngolwazi oluchanekileyo kwaye kufuneka ingeniswe.
Ungeniso lwamaxwebhu: Emva kokuba ifom yesicelo se-visa igcwalisiwe, abafaki-zicelo kufuneka bawaskene amaxwebhu kwaye bawathumele kunye nefom yesicelo. Ukuskena uxwebhu kufuneka kwenziwe ngokucacileyo.
Yenza intlawulo: Isicelo sokugqibela senkqubo yesicelo se-visa sifuna ukuba abafaki-zicelo bahlawule umrhumo wevisa. Abafakizicelo banokusebenzisa ikhadi labo letyala okanye ikhadi lebhanki ukwenza inkqubo. Emva kokuba ifom yesicelo iqhubekile, iVisa yokuVunywa kweVisa iya kuthunyelwa nge-imeyile kwiintsuku ezimbalwa.
Ileta yokuvunywa kweVisa kufuneka inikwe kabini-okokuqala, kwiinqwelomoya xa ukhwela inqwelomoya eya eSao Tome nasePrincipe kwaye okwesibini kumagosa ajongene nokufika afike kwisikhululo senqwelomoya saseSao Tome nasePrincipe. Abasemagunyeni baya kuyijonga le leta kwaye bayitampu i-visa kwipaspoti yomhambi.
Imiyalelo yabahambi abafaka isicelo seSao Tome kunye neVisa yePrincipe
Abantu abahamba beya eSao Tome nasePrincipe nge-eVisa yabakhenkethi abayi kuvunyelwa ukuba bafumane umsebenzi ohlawulelwayo okanye bathathe inxaxheba kwizinto ezifanayo ngexesha lokuhlala kwabo elizweni.
Ukufumana iVisa yokuVunywa kweVisa akwenzi ngokuzenzekelayo ukuba abafaki zicelo bafanele ukufumana i-visa yabo. Amagosa okufudukela kwelinye ilizwe anelungelo lokwala ukungena kubahambi, eSao Tome nasePrincipe.
Yintoni iSao Tome kunye nePrincipe Tourist eVisa?
Urhulumente waseSao Tome kunye nePrincipe wenze ukuba abahambi bafumane i-visa yabo kwi-intanethi. Oku kwenze kwalungela ukuba abahambi bafumane uxwebhu lokuhamba.
Isebenza nini i-Sao Tome kunye ne-Principe eVisa?
I-eVisa isebenza iintsuku ezingama-30 emva kokuba unikiwe uxwebhu lokuhamba.
Athini amaxwebhu ekufuneka umfaki-sicelo afake isicelo se-Sao Tome kunye ne-Principe eVisa?
Kwi-Sao Tome nasePrincipe eVisa, abafaki-zicelo kufuneka bangenise ikopi ekhutshiweyo kwiphepha lenkcukacha zepaspoti, uhambo lokuhamba kunye nedilesi yendawo yokuhlala.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ebonisiwe xa ufikelela eSao Tome nasePrincipe?
Ukufika eSao Tome nasePrincipe, umhambi kufuneka anikezele ngeVisa yokuVunywa kweVisa, amatikiti okubuyisa kunye noxwebhu lokuhamba.
Ngaba ukubuyiselwa imali kuya kuhlawulwa xa isicelo se-eVisa saliwe?
Hayi, abafaki-zicelo abazukuhlawulwa imali yesicelo sabo se-eVisa esaliwe.
Mangaphi amangenelo avunyelweyo kwi-Sao Tome kunye nePrincipe nge-eVisa esebenzayo?
Nge-Sao Tome esebenzayo kunye ne-Principe eVisa, umntu uya kuvunyelwa kuphela ukungena kube kanye.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti yomenzi-sicelo izalisekise xa esenza isicelo se-eVisa?
Abafaki-sicelo kufuneka baqinisekise ukuba ipasipoti abanayo kufuneka isebenze iinyanga ezi-3 okanye nangaphezulu.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo ukuhlawula umrhumo we-Sao Tome kunye ne-Principe eVisa?
Abafakizicelo banokusebenzisa ikhadi labo elifanelekileyo lekhadi okanye ikhadi ledebhithi ukuhlawula umrhumo we-eVisa.
Baza kulufumana phi ulwazi abafaki-zicelo ngobume babo be-eVisa?
Abafaki zicelo baya kufumana lonke ulwazi lwabo ngesicelo se-visa kwii-ID zabo ze-imeyile.
Abafaki zicelo baya kufumana i-visa yabo xa befika kwisikhululo seenqwelomoya iSao Tome kunye nePrincipe emva kokuba beveze incwadi yabo yokuvunywa kwaye behlawulela isitampu sevisa, baya kufumana i-eVisa yabo.